Waa maxay warqadda musqusha aad kugu leeyahay ee ku saabsan - Rule News
Waa maxay warqadda musqusha aad kugu leeyahay ee ku saabsan
Ma waxaad u laallaabi in ka badan ama ka yar? Marka xiga waa idin soo booqan qolka yar ee guriga ka eegi kartaa musqusha duudduuban
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Waa maxay warqadda musqusha aad kugu leeyahay ee ku saabsan” waxaa qoray Ben Ambridge, waayo Observer The on Sunday 27 December 2015 08.30 UTC
Toddobaadkan ha yara ee ay sameeyaan - ahem - play oo duudduuban. Sidee baad u jeceshahay in laga lalmiyaa aad musqusha oo duudduuban? Ma jeceshahay dhamaadka dabacsan si fogaan derbiga ka fogayno (style ka badan) ama soo socda si derbigii (style ku hoos)?
Hadda aan aragno waxa Dr Gilda Carle ("Khabiir xiriirka in xiddigaha") leeyahay in la yidhaahdo oo ku saabsan doorashada.
Haddii aad rogo ka badan ... Waxaad tahay sidii uu qabtay, jamasho urur oo u badan tahay inay overachieve.
Haddii aad rogo hoos ... Waxaad dib u dhigeen-, xiriirka hallayn karo oo ay ku doondoona asaas adag.
Haddii aadan daryeeli, inta ay jirto ... Waxaad ujeedadoodu tahay si loo yareeyo khilaafka, dabacsanaan qiimaha iyo sida naftaada gelinaya in xaaladaha cusub.
Laakiin doorashadaada noo sheegi kartaa wax ku saabsan xoog ku muteystay? Mid ka mid ah sahanka Mareykanka lagu ogaaday in 73% dadka ka yar kasban $20,000 rogo hoos, halka 60% kuwa kasban badan $50,000 rogrogo. sahan Kuwani arrin aan la kulmo heerarka looga baahan yahay baadhitaan cilmi nafsiga sayniska - laakiin haddii column tanu waa reading musqusha jecel in ay idin siin doonaa arin fikir u.
Waayo, version a si buuxda tilmaansado of this article, waxaad tagtaa benambridge.com. Sheeegateen oo qaar ka mid ah su more? Order Psy-Q by Ben Ambridge (profile Books, £ 8,99) ama £ 6,99 ka bookshop.theguardian.com
← Runtu waxa ay tahay waxaa ku yaacaya baxay: sababta muuqooda faafin ka dhaqso badan abid 2015: sanadka shidma faraha ka joojiyay iyagoo Sheekadaas a →